Mullah Cumar oo sanado ku dhuumanayay meel u dhow saldhig Mareykanka ku leeyahay dalka Afqaanistaan - Bulsho News
Maraykanka oo shaaciyey qoraallo ku xidhiidhinaya Sucuudiga weerarradii 9/11
Mullah Cumar oo sanado ku dhuumanayay meel u dhow saldhig Mareykanka ku leeyahay dalka Afqaanistaan
11 Maarso 2019
Waa la cusbooneysiiyay 2 Saacadood ka hor
Waxaa soo baxaya xog cusub oo sheegeysa in hoggaamiyihii hore ee ururka Taalibaan Mullah Cumar oo muddo sanado ah ku noolaa guri u dhow saldhig militariga Mareykanka ku lahaa dalka Afqaanistaan. Mullah iyo Cusama Bin Laaden ayuu muddo dheer aad u doondoonayay Mareykanka.
Iyadoo Taalibaan ay ahdda la waregeen mar kale dalka Afqaanistaan ayaa waxaa soo baxay buug qeexaya sida Mullah Cumar uu u ahaa nin go’doonsan ka hor inta uusan xanuun u dhiman.
Buugaasi oo ay qoaray Bett Dam oo ah suxufi u dhalatay dalka Netherlands ayaa lagu sheegay in Mullah Cumar uu muddo sano ah ku dhuumaaleysanayay guri ku yaal dalkaasi Afqaanistaan oo dhawr kiiloo mitir u jira saldhig weyn oo uu Mareykanka ku lahaa dalkaasi.
Sirdoonka Mareykanka ayaa la sheegay in uu ku guul dareystay in oo ogaado in Mullah oo 10 milyan oo doolar uu madaxiisa dul dhigay ka dib weerarkii 11-kii September ee sanadkii 2001-dii uu ku dhuumaaleysanayay halkaasi.
Mullah ayaa ahaaa ninka labaad ee Mareykanka aadka u doon-doonayay marka laga soo tago Cusama Bin Laden oo sanadkii 2011-kii lagu dilay dalka Pakistan.
Inta badan waxaa la saadaalinayay in hoggaamiyahaasi Taalibaanka uu ku dhuumanayay dalka Pakistan.
Buugan ay haatan qoray gabadhan lagu magacaabo Bette Dam ayaa lagu cadeeyay in Mullah uu muddo sanado ah ku dhuumaaleysanayay gurigaasi oo ciidamada Mareykanka ay mar baareen balse aysan ka helin.
Baaritaanka ay sameysay gabadhan weriyaha ahi ayaa ku saleysan wareysiyo ay la yeelatay dad badan oo uu ku jiro ninkii aadka u ilaaleyn jiray Mullah.
Weriyahan ayaa loo sheegay in hoggaamiyahasi Taalibaanku uu dhageysan jiray BBC-da oo uu wararka halkaasi kjala socon jiray.
Sida la sheegay ma uusan awoodin in uu si dhab ah u maamulo ururukaasi balse waxaa had iyo jeer la adeegsan jiray magaciisa oo Taalibaanku ay warbixinno ku soo saari jireen.
Balse waxaa la sheegayaa in uu bixiyay amarka ah in xafiis uu Taalibaanku ka furto dalka Qadar oo haatan ay ka socdaan wada hadallada la doonayo in lagu dhex dhexaadiyo mareykanka iyo Taalibaan.
Bette Dam ayaa BBC-da u sheegtay in mukhaabaraadka dalkaasi Afqaanistaan ee ku sugnaa gobolka Zabuul oo ah halka uu ku dhashay Mullah ay in muddo ah ka shakisanaayeen in Mullah uu ku dhuumaaleysanayo gudaha dalkaasi Afqaanistaan.
Balse mar kastaa waxaa la hadal hayay in uu ku dhuumaaleysanayo waddanka deriska ah ee Pakistaan, waxaana dhawr jeer militariga Mareykanka uu isku dayay in uu halkaasi ka raadiyo.
Hoggaamiyaha Al-Qaacidda Cusama Bin Laden oo isagana malaayiin doolar uu madixiisa dul dhigay Mareykanka ayaa sanadkii 2011-kii ay ciidamada Mareykanku ku dileen dalka Afqaanistaan.
Waxaase bishan gudaheeda uu Mareykanka malaayiin doolar dul dhigay wiilkiisa Xamza oo wali la baadi goobayo.
Wafdigii ka socday QM oo 5 qodob kala...
Man United Oo Wadahadalo La Furtay Xiddig Ku...
Fahad vs Rooble: Maxaan ka fahannay warqaddii lagu...
Maxay tahay sababta ay maxkamadda ciidamada u baari...